रेडियो श्रनगर – Radio shreenagar
Author: रेडियो श्रनगर
प्रेस चौतारी नेपाल हुम्ला शाखाको सर्वसम्मत नेतृत्व चयन
हुम्ला । प्रेस चौतारी नेपाल हुम्ला शाखाले सर्वसम्मत नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । सिंह प्रेस चौतारी नेपाल जिल्ला शाखा हुम्लाको हालको संयोजक रहेका नन्द सिंह सर्वसम्मत चयन गरिएको छ । सिंहको अध्यक्षतामा २१ सदस्सीय जिल्ला कमिटी सर्वसम्मत चयन गरिएको हो । उपाध्यक्षमा मिग्युर लामा, महिला उपाध्यक्षमा शर्मिला शाही, सचिवमा दाने बोहरा, सहसचिवमा मोतलाल महतारा, समावेशी सहसचिवमा मान बहादुर परियार र कोषाध्यक्षमा ब
सिमकोटमै किन थन्कियो तारा एयरको जहाज ?
दाने बोहरा आइतवार, पुष ४ हुम्ला। विमानको पखेटाबाट फ्युल चुहिएपछि तारा एयरको जहाज सिमकोट विमानस्थलमै थन्किएको छ शनिबार दिउँसो सिमकोट विमानस्थलमा अवतरण गरेको तारा एयरको ट्वीनटर जहाज त्यसयता सिमकोटमै थन्किएको छ। जहाजमा प्राविधिक समस्या आउँदा मर्मत हुन नसकेपछि जहाज सिमकोट विमानस्थलमै थन्किएको हो। सिमकोट विमानस्थलका प्रमुख मोहन गिरीले तारा एयरको जहाज शनिबार सिमकोट विमानस्थलमा अवतरण गरिसकेपछि पखेटामा
एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटी बैठक सुर्खेतमा शुरु
सुर्खेत । नेकपा एमालेको कर्णाली प्रदेश कमिटीको बैठक सुरु भएको छ। यही पुस २३ गते जिल्ला र आगामी माघ ८ गतेका लागि तय भएको प्रदेश अधिवेशनका बारेमा आवश्यक छलफल गर्न प्रदेश कमिटीको बैठक प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गोरेबहादुर बोगटीले जानकारी दिए। ‘माघ ८ मा प्रदेश अधिवेशनको मिति केन्द्रीय कमिटी बैठकले तय गरिसकेको छ। त्यसको तयारी लगायतका विषयमा आज
काठमाडौं । नेकपा एमालेको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएको छ । १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तरगत नेतृत्व चयनका लागि मंगलबार भएको मतदानमा प्रतिस्पर्धी डा. भीम रावललाई भारी मतान्तरले हराउँदै ओली अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको हो । एमाले निर्वाचन आयोगका सदस्य सानुराजा पोखरेलले दिएको अनुसार अध्यक्ष पदमा केपी शर्मा अ‍ोलीले १८०८ मत प्राप्त गरेर विजयी भएका हुन् । उनका प
अग्नी पीडितको बिचल्ली आठ घरधुरीलाई मात्र प्रदेश सरकारको त्रिपाल
हुम्ला । कार्तिक २९ गते रातिको भीषण आगलागीबाट मुगुको गमगढीका ८० परिवार विस्थापित भए । २१ घर जलेर नष्ट हुँदा ३५ करोड बढीको धनमाल क्षति भएको छ । जायजेथा सबै गुमाएका पीडित परिवारले अहिलेसम्म उचित राहत भने पाएका छैनन् । एक साता बितिसक्दा पनि उनीहरू बिचल्लीमै परेका हुन् । तीन वटै तहका सरकारले आफूहरूलाई आवश्यक राहत नदिएको अग्नीपीडितको गुनासो छ । सरकारी पक्षबाट आवश्यक सहयोग नभएपछि पीडित परिवार भोकै खुल
हिमाली गाउँपालिका ४ बोर्ताका १ सय १५ घरधुरी खानेपानिको संकटमा ।
मंसिर १ देबराज मल्ल, बाजुरा । हुम्ला जिल्लाको नजिकै रहेको बाजुराको हीमाली गाउँपालिका ४ बोर्ताका करिव १ सय १५ घरधुरी खानेपानिको समस्या झेलीरहेका छन । कार्तिक १ गते देखी ५ गते सम्म परेको बेमौसमीअविरल वर्षाले खानेपानिके मुहान भत्काएपछि वडा नं ४ बोर्ताका स्थानिय खानेपानि वाट बञ्चित बनेका छन । बोर्ता गाउँ भन्दा ४ किलोमिटर टाढा रहेको पानिको मुहान वर्षाले भत्काएपछि अहिले गाउँमा पानिको हाहाकार भएको छ । म
यि हुन् ६३ जिल्लाबाट छनोट भएका एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि (सूचीसहित)
काठमाडौं । आसन्न दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले ६३ जिल्लामा प्रतिनिधि छनोटको काम सकाएकमो छ । एमाले केन्द्रीय प्रचार बिभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म ६३ जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भई केन्द्रीय कार्यालयमा नाम प्राप्त भएको छ । यस्तै एउटाबाहेक सवै जनसंगठनले पनि प्रतिनिधि छनोट सकाएको छ । राष्ट्रिय युवा संघले भने हालसम्म प्रतिनिधि
सकेसम्म आजै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ ,प्रचण्ड
असोज १८ सोमबार ,हुम्ला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सकभर आजै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने बताएका छन् । माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सोमबार आयोजित नेपाल बुद्धिजीवी संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सकभर आजै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारीमा गठबन्धन रहेको बताएका हुन् । उनले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसके पनि मन्त्रालयको भागब